Online Ule dị mkpa | Martech Zone
Yabụ ị mechara tinye usoro ịre ahịa ịntanetị gị niile ma ha arụ ọrụ ma na-arụ ọrụ nke ọma. Na-enwe ike ịlele ma hụ mmetụta nke atụmatụ ọ bụla n'adabereghị… ugbu a ọ bụ oge iji malite nyocha. Ebee ka ịmalite?
site KISSmetrics: Igwe olulu ahia e wuru nke ọma anaghị agwụ agwụ ruo mgbe a nwalere ma bulie akụkụ ya niile. Maka ihe ịga nke ọma kachasị elu, ndị na-ere ahịa kwesịrị igwu ala ma nwalee ebe ọ bụla ndị ahịa na-emekọrịta ihe. Ihe na - esote bụ ntuziaka dị nkenke nke na - akọwapụta ihe dị mma iji nwalee ma bulie mgbe niile-gụnyere PPC, mgbasa ozi na-azụta, ibe ọdịda, na mkpọsa email. Kwesighi ịnwale ihe niile n'otu oge. Malite site na ọrụ ahia ndị na - emepụta nloghachi kachasị elu wee rụọ ọrụ ala.
Tags: ule ulenjikarịcha ntụgharịnyocha emailụdị uleUdogbeule peejiule n'onlinentanetkwụọ ụgwọ kwa Pịaụlọ nkwonkwo ahịabanye ụdịtesting